के वामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोक्छ ? के छ धारा ७६, र ७८ मा ? - Everest Dainik - News from Nepal
के वामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोक्छ ? के छ धारा ७६, र ७८ मा ?
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले युवराज खतिवडाको पदावधि रिक्त रहेको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सहमति गरेपछि उनी मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा बहस सिर्जना भएको छ ।
गौतम आफुले भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने इच्छा सार्वजनिकरुपमा नै गरेका छन् । कतिपयले खतिवडाको स्थानमा नै गौतम मन्त्री बन्ने समेत टिप्पणी गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मन्त्री समेत हेरफेर गर्ने र सोही क्रममा वामदेव गौतमलाई समेत मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने समेत कतिपयले भनिरहेका छन् ।
यसैबीच वामदेव गौतम गत निर्वाचनमा पराजित भएको हुँदा संविधान अनुसार, उनी मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयले समेत चर्चा कमाएको छ ।
संविधानको भाग ७ मा रहेको ‘संघीय कार्यपालिका’ सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुनविद्हरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।
त्यसो भए के छ त भाग ७ मा ?
संविधानको भाग ७ को धारा ७६ र ७८ को अहिले धेरै चर्चा भएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा ९ वटा उपधारा रहेका छन् । पहिलो उपधारा (१) देखि (८) सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति या चयनका बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।
वामदेवसँग जोडिएको प्रावधान भने उपधारा (९)मा व्याख्या गरिएको छ ।
उपधारा ९ मा लेखिएको छः
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
त्यसपछि धारा ७७ मा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था का बारेमा उपधारा १ र २ मा उल्लेख छ ।
यो पनि वामदेवसँग सम्बन्धि रहेन ।
अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा भनेको ७८ हो । यसको शीषक नै “संघीय स्रंसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने” रहेको छ । त्यसैले यसको उपधारा १ अनुसार, वामदेव गौतम मन्त्री हुन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाभित्रको बहस पदका लागि होइनः प्रचण्ड
धारा ७८ (१) मा लेखिएको छः
यहाँ धारा ७५ को उपधारा (९) भन्नाले “संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने” भन्ने हो । त्यसैले यो ७८ को १ ले यस्तो जे सुकै लेखिएको भएपनि निर्वाचन नजितेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने ढोका खोलेको हो ।
तर वामदेवको हकमा उनी निर्वाचित भन्दा पनि निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति हुन । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिका हकमा संविधानमा के छ त भन्ने कुरा यहाँ लागु हुन्छ ।
धारा ७८ को २ मा त्यसरी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने अर्थात् उप निर्वाचन या राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको हुनुपर्ने अवस्था संविधानले अनिवार्य बनाएको देखिन्छ ।
अब महत्वपूर्ण कुरा धारा ७८ (४) मा छ । यहाँ यसै धारा ७८ को उपधारा १ लाई अझ व्याख्या गरिएको छ । उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदका लागि योग्य हुनसक्छ भनिएको छ ।
७८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छः
(४) उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
अर्थात् यदि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अर्थात् संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले त्यो सक्छन् तर यदि ती व्यक्तिले दुईवटा शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो ६ महिनाभित्र संघीय संसद बन्नुपर्यो । कि त फेरी चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य या राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्यो कि मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्यो । दोश्रो, उक्त व्यक्ति पराजित उम्मेदवार हुनु भएन ।
याे पनि पढ्नुस बाबुरामविरुद्ध उजुरी दिन नेकपाका कार्यकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयमा
अब यो धारालाई कसरी व्याख्या गर्ने समस्या अहिले हो ।
यो धाराले धारा (१) बमोजिम आउन सक्नेको कुरा गरेको छ ।
जबकि वामदेव राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेको अवस्थामा धारा (१) आकर्षित हुँदैन । किनभने उनी संघीय संसदको सदस्य भइसकेका हुन्छन् । धारा ४ ले संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउँदा उक्त व्यक्ति पराजित भएको हुन नहुने भनेको हो ।
यदि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नलगिकन मन्त्री बनाउने हो भने यो धारा आकर्षित हुन्छ । उनी मन्त्रीपदका लागि योग्य हुँदैनन । तर उनी राष्ट्रिय सभामा गइसकेको हुनाले यो ७८ को उपधारा ४ उनका लागि लागु हुने देखिँदैन ।
पढ्नुस् धारा ७६ र ७८ को पूर्ण पाठ
प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस वडाध्यक्षसहित १ सय कार्यकर्ता नेकपा प्रवेश
ट्याग्स: नेकपा, राष्ट्रिय सभा सदस्य, वामदेव गौतम